Namoaka fanambarana ny Ben'ny tanana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Aok’izay ny ra latsaka”
Eo anatrehan’ny zava-miseho eto amin’ny Tany sy ny Firenena, dia manao izaho fanambarana izaho ny tenako amin’ny maha-Reny, Ben’ny Tananan’Antanarivo, Renivohitr’i Madagasikara :
1. Miondrika am-panajana eo anoloan’ireo Mahery Fo Maty namoy ny ainy tamin’ny Asabotsy 21 Aprily 2018, mampahery ihany koa ireo fianakaviana. Mirary fahasitranana ho an’ireo naratra ka mbola mandalo fitsaboana amin’izao fotoana izao.
2. Ampy izay ny ra latsaka! Tsy ekeko ho Tanàna mihoson-drà Iarivo, satria tsy izay no fanamby nifanaovako taminareo vahoakan’Iarivo, fa ny hifanome tànana hampandroso azy.
3. Manameloka tanteraka ny fampiasan-kery amin’ny vahoaka mivory am-pilaminana, ao antin’ny fanajana ny lalàna velona.
4. Manao antso avo ho anareo Mpitandro ny Filaminana (Tafika sy Foloalindahy, Zandary sy Polisy) mba tsy hampiasa hery amin’ny vahoaka maneho hevitra, fa hitandro ny filaminana sy hiaro ny ain’ny olona sy ny fananany.
5. Manana ny falalahana manao tatitra ny Solombavambahoaka araky ny voalaza ao amin’ny Lalam-panorenana ka izay indrindra no nanekeko ny fangatahana hanao tatitra eto amin’ny Lapan’ny Tanàna, izay soa iombonan’ny Malagasy.
6. Ry Ray aman-dReny FFKM, raiso ny adidy sy ny andraikitra izay ihantsorohanareo eto amin’ny firenena.
7. Miantso antsika rehetra aho amin’ny maha-Reny sy Ben’ny Tananan’Antananarivo, Renivohitr’i Madagasikara : aoka samy ho tony ka handala ny soatoavina Malagasy izay hanjakan’ny FIHAVANANA.
Ry Vahoakan’Iarivo, eo anilanareo mandrakariva aho Ben’ny Tanana sy Reninareo.
Androany faha 23 aprily 2018